U-Barack Obama ucebise ngokufunda iincwadi ezi-4 kwintombi yakhe iMalia | Uncwadi lwangoku
Malia, enye yeentombi ze UBarack Obama, Ndiza kuya kwikholeji kungekudala. Kungenxa yesi sizathu ukuba utata wakhe, umongameli wase-United States ukuza kuthi ga ngoku, afune ukucebisa ngentombi yakhe ukuba ifunde iincwadi ezi-4, ezimbini zazo ngokucacileyo zingumfazi.
Enye ye iindlela zokuzonwabisa Owayesakuba nguMongameli u-Obama aqhayise kakhulu ngexesha lakhe e-ofisini, ebenjalo Uncwadi. Kudliwanondlebe, wathi ngulowo wayenzayo. ukuba ngumntu ongcono, kunye nalowo wayehamba naye kwiminyaka yakhe enzima (ngamanye amaxesha) ye-White House. Wade waya kuthi enkosi kwiincwadi, wayesindile kuloo minyaka e-ofisini.
Kodwa, Zithini iingcebiso malunga noncwadi kwintombi yakho uMalia? Emva koko, sinesishwankathelo esifutshane ngasinye.
1 UDoris Lessing's "Incwadana yeGolide"
2 "AbaNqunu nabaFileyo" nguNorman Maler
3 "Umfazi Oligorha" nguMaxine Hong Kingston
4 "Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa" nguGabriel García Márquez
UDoris Lessing's "Incwadana yeGolide"
Le ncwadi yombhali uDoris Lessing, ibalisa ngobunzima obunzulu bobomi buka-Anna Wulf, umbhali oqhawule umtshato kunye nomlo wobukomanisi. Kuphela yindlela entsha yokujonga ubunyani onokuyigcina, kwaye ukuza kuthi ga ngoku u-Anna uqala ukubhala iincwadana ezininzi, nganye inikezelwe kwinxalenye yobukho bakhe. Ukusilela ukubenza banike umfanekiso opheleleyo wobukho bakhe, uqala ukubhala incwadana yegolide, apho anqwenela ukubamba zonke iziphelo zebali lakhe.
"AbaNqunu nabaFileyo" nguNorman Maler
"AbaHamba nabaFileyo" Yavela e-United States ngoMeyi ka-1948, kanye kwiminyaka emithathu emva kosuku lokoyisa kwee-Allies kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. UNorman Mailer, umbhali wayo, wayeneminyaka engamashumi amabini anesithandathu ubudala, kwaye emva kokuphumelela eHarvard nokubhalisela umkhosi, wayephakathi kwemikhosi eyayihlala eJapan emva kokoyiswa. Abagxeki bawubiza umsebenzi wakhe "yeyona ncwadi inkulu yemfazwe ibhalwe kule nkulungwane," ekuhambeni kwexesha ibe yincwadi yasentsomini. Iposi yathelekiswa neHemingway kunye neTolstoy kwaye kwangoko yabekwa phakathi kwee-greats zoncwadi lwaseMelika.
Le ncwadi ibalisa ngamanye ala mava awayephila ngoMailer ngokwakhe kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi.
"Umfazi Oligorha" nguMaxine Hong Kingston
Le inoveli ingobomi bomntu. Yapapashwa kwimeko apho indima yokubhala yabasetyhini yabuza kakhulu. Okwangoku, lo mbandela yenye yeenoveli ezingabalulekanga zobufazi. Njengoko siyiqonda, yeyona ncwadi ifundwayo kwaye isetyenziswa kakhulu kule mihla kwikholeji yaseMelika.
"Iminyaka Elikhulu Yokuba Wedwa" nguGabriel García Márquez
Le ncwadi inkulu yaziwayo nguGabriel García Márquez nayo iye yaqaqanjiswa ngu-Obama. Kuya kufuneka sikhumbule ukuba yenye yeencwadi ezithengisa kakhulu embalini kwaye njengoko wonke umntu esazi ngokuqinisekileyo (angakho umntu ofunda rhoqo ongekayifundi le noveli?) Ibalisa ibali losapho lakwaBuendía kulo lonke Izizukulwana ezisixhenxe kwidolophu eyintsomi yaseMacondo.
Ucinga ntoni ngeencwadi ezacetyiswa ngumongameli wase-United States kwintombi yakhe? Kwincasa yam, uphumelele kakhulu ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » U-Barack Obama ucebise ngokufundela intombi yakhe uMalia iincwadi ezi-4
UDonald Trump uyazithanda iincwadi kodwa akafundi kangako